Samsung's upcoming foldable phone is 'Galaxy Bloom'! - TechPana Tech News Nepal
स्मार्टफोनको ब्याट्री चाँडै सकिन्छ ? यसो गर्नुहोस्
शुक्रबार, पुष २५, २०७६ १६:४८
२ सय जना डेलिभरी राइडर खोज्दै फुडमाण्डु, पारिश्रमिक
रातभर स्मार्टफोन चार्जमा छोड्दा के हुन्छ ?
सीसीटीभी जोड्नु भएको छ ? थाहा पाइराख्नुहोस् सरकारको
देशभित्र कुन नम्बरमा फोन गर्दा मोबाइलमा कति लाग्छ
प्रविधिमा अमेरिकी हस्तक्षेप कम गर्न आफ्नै संयन्त्र तयार
किन कलेजी देखियो म्यासेञ्जर ?
डिपफेक प्रयोग गरी एक लाख महिलाको नग्न तस्वीर
क्लिन फिड च्यानलका रुपमा भारतको ‘जी’ नेटवर्कले थाल्यो
आजबाट सबै टेलिभिजनमा आउने भयो आईपीएलको लाइभ
क्लिन फिड असर : कार्टुन च्यानल र सीएनएन
पोर्न साइटमा देखिन थाले 'कपल च्यालेञ्ज'का फोटो !
नेपाल टेलिकमले ल्यायो चाडबाड अफर, फेसबुक र युट्युव
सामसङको आउँदै गरेको फोल्डेवल फोनको नाम ‘ग्यालेक्सी ब्लुम’ !
दक्षीण कोरियाबाट गत वर्ष प्रकाशित एक रिपोर्टले सामसङको आगामी फोल्डेबल फोनको नाम ब्लुम हुने दाबी गरेको थियो । अहिले भर्खरै फेरी अर्को रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ जसले ब्लुम वास्तवमा फोनको मार्केटिङ नाम हुने जनाएको छ ।
अमेरिकाको लसभेगासमा जारी विश्वकै ठूलो सूचना प्रविधि मेला सीईएसका दौरान सामसङले साझेदार तथा बिक्रेतासँ भएको गोप्य बै‌ठकमा उक्त फोन सोकेसमा राखिएको थियो । बैठकका क्रममा देखाइएको उक्त फोनको नाम ग्यालेक्सी ब्लुम रहेको बताइएको छ । ग्यालेक्सी ब्लुमको डिजाइन मोटोरोला रेजरकै जस्तो देखिने फोल्डिङ डिजाइन रहेको छ ।
सामसङले यो पनि प्रष्ट पारेको छ कि गत वर्षको सफलतम स्मार्टफोन ग्यालेक्सी एस टेन ग्यालेक्सी एस ट्वान्टीको रुपमा आउनेछ । ग्यालेक्सी एस ट्वान्टी सिरिजमा समेत ग्यालेक्सी एस ट्वान्टी प्लस र ग्यालेक्सी एस ट्वान्टी अल्ट्रा मोडेलहरु रहनेछन् ।
ग्यालेक्सी एस ट्वान्टी र ग्यालेक्सी ब्लुम दुबै फोनमा फोरके सम्मको भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिने १०८ मेगापिक्सेलको प्राइमरी क्यामेरा सेन्सर रहेको छ । सामसङले ग्यालेक्सी एस ट्वान्टी सिरिजका फोनहरु आगामी ११ फेब्रुअरीमा हुने कार्यक्रममाझ औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । सान फ्रान्सिस्कोमा हुने सोही कार्यक्रममा ग्यालेक्सी ब्लुम समेत सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
याहूले सार्वजनिक गर्‍यो आफ्नो पहिलो स्मार्टफोन, यस्तो छ मूल्य र स्पेसिफिकेसन
काठमाडौं । याहू मोबाइलले आफ्नो पहिलो स्मार्टफोन जेडटीई ब्लेड ए थ्री वाई सार्वजनिक गरेको छ
लेडिज स्मार्टफोन ल्याउँदै लाभा
काठमाडौं । भारतीय मोबाइल निर्माता कम्पनी लाभाले आउँदो तिहारसम्म महिलाका लागि विशेष मोबाइल लाभा बीई
१४४ हर्ज रिफ्रेश रेट भएको रेड्मी के थर्टी एस सार्वजनिक
काठमाडौं । साओमीले के सिरिजको नयाँ स्मार्टफोन रेड्मी के थर्टी एस सार्वजनिक गरेको छ ।
लाभाले ल्यायो थर्मोमिटरयुक्त पहिलो फोन, ब्याट्री पनि ६ दिनसम्म टिक्ने
काठमाडौं । भारतीय मोबाइल निर्माता कम्पनी लाभाले थर्मोमिटर भएको विश्वकै पहिलो फोन सार्वजनिक गरेको छ
क्लिन फिड असर : कार्टुन च्यानल र सीएनएन सधैंका लागि बन्द
क्लिन फिड च्यानलका रुपमा भारतको ‘जी’ नेटवर्कले थाल्यो नेपालमा प्रसारण
डिपफेक प्रयोग गरी एक लाख महिलाको नग्न तस्वीर सार्वजनिक
ल्यापटपको सीपीयू धेरै तात्तिन्छ ? यसरी गर्नुहोस् निगरानी
सीसीटीभी जोड्नु भएको छ ? थाहा पाइराख्नुहोस् सरकारको नियम
गुगलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सर्च इन्जिन व्यवसायमा हात हाल्दै एप्पल
एन्ड्रोइड टिभीमा यसरी परिवर्तन गर्नुहोस् स्क्रिन सेभर
२ सय जना डेलिभरी राइडर खोज्दै फुडमाण्डु, पारिश्रमिक ३० हजारसम्म